Markabkii muranka dhaliyay ee Iiraan oo u jiheystay dhinaca Turkiga | Berberanews.com
Home WARARKA Markabkii muranka dhaliyay ee Iiraan oo u jiheystay dhinaca Turkiga
Markab ay leedahay Iiraan oo xiisad weyn ka dhex abuuray xukuumadaha Tehran iyo Washington ayaa lagu soo warramay inuu baddalay halkii uu u socday, isagoo hadda u jiheystay dalka Turkiga, sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee Reuters.
Safarka markabka ayaa markii hore laga warhayay inuu ku wajahnaa koonfurta waddanka Giriigga, balse waxaa dhacay isbaddal aan laga sii warqabin, sida lagu muujiyay xog uu maanta oo Sabti ah soo saaay qalabka lagula socday xaaladdiisa.
Bog ay internet-ka ku leeyihiin Ciidamada ilaalada badaha ayaa lagu soo bandhigay sheekada lama filaanka ah ee ku saabsan markabka muranka dhaliyay.
Adrian Darya oo horay loogu yaqaannay Grace 1, ayaa dhawaan la fasaxay ka dib markii muddo 5 isbuuc ah la xannibayay.
Muranka oo ayaa ka dhashay in markabkan uu saliidda Iiraan u waday dalka Suuriya, tallaabadaas oo xad gudub ku ah cunaqabateynta dhaqaalaha ee ay dalalka Midowga Yurub ku soo rogeen waddanka Iiraan bartamihii bishan Agoosto.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in markabkaas ay maamulaan ciidamada kacaanka Iiraan, kuwaasoo oo ay Washington u aqoonsan tahay urur argagixiso ah.
Waxay ay Mareykanku dalalka gobolka ka dambadeen inaysan caawinin markabkaas.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in xog horay usoo baxday ay muujisay in markabkan, oo ay saliid ka buuxdo, uu u socday dakadda magaalada Kalamata ee koonfurta dalka Giriigga.
Hase ahaatee, hadda wuxuu markabkan ka gudbay Giriigga, isagoo sii maray badda Mediterranean-ka, wuxuuna 31-da bishan Agoosto ku xiran doonaa dakadda magaalada Mersin ee dalka Turkiga.
Dowladda Giriigga ayaa dhawaan sheegtay inaysan wax caawinaad ah siin doonin markabkaas saliidda wada.
Wali ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Mareykanka, kaasoo ay uga jawaabayaan go’aanka uu Turkiga ku qaatay in markabkan uu waddankiisa ku xirto.
Previous articlewararkii u danbeeyay ee xaaladda magaalada Badhan
Next article“Waxaan ka bad baaday isku-day dil” Masuul ka tirsan Wadddani
Golaha Guurtida Somaliland oo ka hadlay safarka Farmaajo ku maaganyahay Somaliland
Faysal Cali-waraabe oo lab hadlay imaatinka Farmaajo
“Farmaajo inuu Somaliland ku sheego Gobolo Waqooyi waa ku khalad“ Cabdillaahi...
Ismaaciil Cumar Geelle oo khudbad xasaasiya ka jeediyay shirka Midowga afrika
Taliyaha Booliska Awdal oo ka hadlay cidda ka danbaysay weerar lagu...
Turkiga oo askar kale lagaga laayay Syria
Madaxweynaha Somaliland oo qaab meeqaam sare ah loogu qaabilay Addis Ababa
“Somalia waxay noqon kartaa Xarunta Dhaqaalaha” Madaxweyne Farmaajo
Guddida Wanaag-farista Awdal iyo Selel oo go’anno ka soo saaray Badhasaab...
Madaxweynaha Somaliland oo safar ugu baxay dalka Itoobiya
Sool: Maamulka Boocane oo kulan la qaatay Ciidamo loo qarameeyay
Damaca Ruushka ee Dekedda Berbera, Madaxweyne Biixi oo ruushka wax ku...
Magaaalada Wuhan cudurka Corona awgii Waxa laga mamnuucay aroosyada